Iqela lePolitiko leMelika lokuqala: IQumrhu likaRhulumente
IQumrhu lika-Federalist: I-American First Political Party
Njengombutho wezopolitiko wokuqala waseMelika, iqela le-Federalist lasebenza ukusuka ekuqaleni kwe-1790 ukuya kuma-1820. Kwimfazwe yefilosofi yezopolitiko phakathi koBawo oQalayo , i-Federalist Party, ekhokelwa ngumongameli wesibini uJohn Adams , elawula urhulumente wephondo ukuya kutsho ngo-1801, xa yalahlekelwa yiNdlu ye-White House kwiqela elijongene ne-Anti-Federalist elikhokelwa nguMongameli wesithathu. Jefferson .
Eyakhelwe ekuqaleni ukuxhasa imigaqo-mali kunye neebhanki yakwa- Alexander Hamilton , i
IQumrhu le-Federalist likhuthaze umgaqo-nkqubo wasekhaya owanikezela urhulumente ombindi oqinileyo, ukhulise ukukhula koqoqosho, kwaye ugcine uhlahlo lwabiwo-mali olujongene nolwabiwo-mali. Ngomgaqo-nkqubo welizwe langaphandle , amaFederalists afuna ukuseka ubudlelwane obufudumele kunye neNgilani, ngelixa bechasene neRussian Revolution .
Umongameli oyedwa we-Federalist Party nguJohn Adams, owakhonza ukususela ngo-Matshi 4, 1797 ukuya kuMatshi 4, 1801. Nangona u-Adams owayengummangaleli, uMongameli uGeorge Washington , uthathwa njengelungelo lomgaqo-nkqubo we-Federalist, akazange akhankanye ngokusemthethweni naliphi na iqela lezopolitiko, -ukubambisana nomongameli wakhe weminyaka esibhozo.
Emva kokuba umongameli uJohn Adams ephelile ngo-1801, abaqeshwe be-Federalist Party baqhubeka bephumelela ngokhetho lukaMongameli ngo-1816. Iqela lahlala likhuthele kwamanye amazwe ukuya kuma-1820s, kunye nabaninzi bamalungu abo awamkela amaDemocratic okanye ama- Whig .
Nangona ubude obufutshane bubufaniswa namaqela amabini anamhlanje, iqela le-Federalist lishiya ingqalelo ehlala njalo eMelika ngokusekela izinto ezisemgangathweni zoqoqosho lwelizwe kunye neenkqubo zebhanki, ukuqinisa umgaqo-nkqubo welizwe, nokudala imigaqo-nkqubo yelizwe langaphandle kunye nokudibanisa. namhlanje.
Kanye noJohn Adams noAlexandria Hamilton, ezinye iinkokeli ezivelele ze-Federalist Party zaziquka uJaji oyiNtloko uJohn Jay, uNobhala weeNkundla kunye noMgwebi oyiNtloko uJohn Marshall, uNobhala kaRhulumente kunye noNobhala weMfazwe uTimothy Pickering, ongummeli owaziwayo uCharles Cotesworth Pinckney, kunye neSenator kunye ne-diplomate Rufus King.
Ngo-1787, aba baholi beqela le-Federalist Party bebeyingxenye yeqela elikhulu elithandekayo ekunciphiseni amandla alo mazwe ngokutshintshwa kweeNqaku zeNkquthela ezingaphumeleli kunye nomgaqo-siseko omtsha obonakalisa urhulumente ombini onamandla. Nangona kunjalo, ekubeni amalungu amaninzi kwiqela elizayo le-Anti-Federalist Democratic Republic of Representative likaTomas Jefferson noJames Madison nabo babethelela uMgaqo-siseko, i-Federalist Party ayikho ngqo ephuma kwi-Pro-Constitution okanye iqumrhu elithi "federalist". Kunoko, i-Federalist Party kunye neqela layo elichasene neDemocratic Republic Party liye laphendukela kwiminye imiba.
Apho iQumrhu leStristist lihlala kwiingxaki
IQumrhu lika-Federalist liye layifumene nempendulo yalo kwizinto ezintathu eziphambili ezijongene noorhulumente omtsha we-federal: inkqubo yeemali zeebhanki zombuso, ubudlelwane bezobambiswano kunye ne-Great Britain, kunye neyona nto inokuphikisanayo, imfuno yenkqubo entsha yoMgaqo-siseko wase-United States.
Ukujongana neemeko zebhanki kunye nemali, ii-Federalists zithethelela icebo lika-Alexander Hamilton kwi-charter yebhanki yesizwe, yakha i-nintle ye-federal, kwaye i-federal government ithathe i-Arms Revolutionary War of debts.
Ama-Federalists nawo ayemi ngobudlelwane obuhle ne-Great Britain njengoko kuboniswe nguJohn Jay kwisivumelwano sakhe se-Amity sathethana ngo-1794. Eyaziwa ngokuba yi "Treaty Yayingqinisiso, Amalungelo aseCrithani aseCrithani.
Ekugqibeleni, iqela le-Federalist lixelise ngokuqinisekileyo ukuqinisekiswa komGaqo-siseko omtsha. Ukunceda ukutolika uMgaqo-siseko, u-Alexander Hamilton wavelisa kwaye wakhuthaza imbono yamagunya eNgqungquthela athi, ngelixa lingazange linikezelwe ngokusemthethweni kuMgaqo-siseko, labonwa "liyimfuneko kwaye lifanelekileyo."
Umdlali we-Federalist Party, iDemocratic-Republican Party, ekhokelwa nguTomas Jefferson , wamgxeka imbono yebhanki kazwelonke kunye namagunya akhethiweyo, kwaye wahlaselwa ngenyameko kwisivumelwano sikaJay kunye neBrithani njengokungcatshiswa kwamaxabiso aseMelika. Bavuma u-Jay noHamilton njengabalawuli bamakhosi, baze basasaze amaphephancwadi afundayo athi: "Dumani uJohn Jay! Dumani wonke umntu ongeke adle uJohn Jay! Damn wonke umntu ongeke abeke izibane kwiwindow yakhe aze ahlale ubusuku bonke ebona uJohn Jay! "
Ukukhawuleza Ukuphakama nokuwa kweQumrhu le-Federalist
Njengoko imbali ibonisa, inkokheli yama-Federalist uJohn Adams yanqoba uongameli ngo-1798, "iBhanki yaseUnited States" yaseHamilton yaba khona, kunye neYay Treaty yavunyelwa. Ngokuxhaswa nguMongameli uGeorge Washington ongengabandakanyeli abaye bavuya phambi kokhetho luka-Adams, ii-Federalists zanqoba iimfazwe eziphambili zezomthetho ngexesha le-1790.
Nangona iqumrhu le-Federalist linexhaswa ngabavoti kwizixeko ezinkulu zesizwe kunye neNew England, amandla akhe okhetho aqala ukukhawuleza njengoko iDemocratic Republic of Party yakha isiseko esikhulu kunye nesakhelo kwiindawo ezininzi zasemaphandleni zaseMzantsi.
Emva komkhankaso okhuni onzima ojikeleza ukuwa kwe- French Revolution kunye ne- Quasi-War neFrance, kunye neerhafu ezintsha ezibekwa ngu-Federalist, uMphathiswa waseDemocratic Republic-Republican, u-Thomas Jefferson watshitshisa uMongameli we-Federalist uJohn Adams ngamalungu angama-8 anyulo iivoti ekhethweni oluchasiweyo lwe-1800 .
Nangona beqhubeka nokuqhuba abagadi bezithuba ngowe-1816, iQumrhu lika-Federalist alizange liphinde liphinde lilawulwe yiNdlu ye-White House okanye iCongress. Nangona ukuchaswa kwayo kweMfazwe ye-1812 kwandinceda ekufumaneni inkxaso ethile, konke kwaphela ngexesha le- Era yeemvakalelo ezilungileyo ezalandela ekupheleni kwemfazwe ngo-1815.
Namhlanje, ilifa lePublicist Party lihlala ngendlela yolawulo oluseburhulumenteni omeleleyo waseMelika, inkqubo yebhanki yesizwe ezinzile, kunye nesiseko soqoqosho oluzinzileyo. Nangona bekungayi kuphinda kubuyiselwe amandla olawulo, imigaqo ye-Federalist yaqhubeka ibandakanya umgaqo-siseko kunye nenkundla yomgwebo kangangokuba phantse iminyaka engamashumi amathathu kwiSigqeba seNkundla ephakamileyo phantsi kweJaji eliyiNtloko uJohn Marshall.
IiNtshukumo eziPhambili ze-Federalist
I-Federalist Party yayiyinxalenye yokuqala yepolitiki yegosa laseburhulumenteni.
Kukho ukususela kwiminyaka ye-1790 ukuya ekuqaleni kwe-1820s.
Ilungu elilodwa kuphela lokuba ngumongameli nguJohn Adams, okhethwe ngo-1796.
Ezinye iinkokheli zaziquka uAlexander Hamilton, uJohn Jay, noJohn Marshall.
Kwachaswa yiPublic Democrat Party ekhokelwa nguTomas Jefferson.
Iqela limi ngurhulumente ophakathi oqinileyo, uqoqosho oluchanekileyo, kunye nokudibanisa neBrithani.
> Ubusi, uBukhosi boKhuseleko: Imbali yeRiphabhlikhi yasePrince , 1789-1815 (2009).
> John C. Miller, I-Federalist Era 1789-1801 (1960)
> Elkins noMcKitrick, Ubudala be-Federalism , iphepha 451-61
> I- Federalist Party: Amaqiniso kunye nesishwankathelo , History.com
Ukhetho lukaMongameli luka-1968
Umhla woRhwebo lweTrans Atlantic
I-Taurus Inyanga epheleleyo kwiiNdlu
Ukwahlukana phakathi koMgaqo we-Oxidation State kunye ne-Oxidation Number
Izibonelo ze-Hydrogen Bond (iKhemistry)
Indlela yokubiza ngokuthi uMao Zedong
Iilwimi ezingavumelekanga kunye neeNqununu zazo
Ubugcisa kunye neNkcubeko yeNtsha kwiJamani yaseDemocratic Republic